Dhallinyarada Huawei MediaPad M5: Tilmaamaha, qeexitaannada iyo Qiimaha | Androidsis
Huawei MediaPad M5 Youth: kiniiniga cusub ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Haaruun Rivas | | Huawei, Kiniiniyada Android
Ka dib markii la bilaabay Mediapad M5 Bishii la soo dhaafay ee Febraayo, Huawei wuxuu noo hayaa nooc cusub oo tan ah, mana aha mid kale oo aan ahayn Dhalinyarada MediaPad M5, nooc ka kooban qeexitaanno farsamo oo dhinac laga jaray dhinacna laga xoojiyay, sida qaybta sawir qaadista.
Inta badan, Aaladda «Dhallinyarada» waxaa loogu talagalay dhagaystayaal da'yar oo jecel qaadista. Dhallinyarada Huawei MediaPad M5 maahan mid ka reeban tan. Waan kuu soo bandhigeynaa!
Dhallinyarada Huawei MediaPad M5 ayaa dhowaan laga daah furay Shiinaha. Kiniinkani wuxuu leeyahay a 10,1-inch shaashad taageerta xallinta FullHD ee 1.920 x 1.080 pixels. Waxay ku habboon tahay M-Pen Lite stylus, oo aqoonsanaysa 2048 digrii oo niyadjab ah. Kirin 659 chipset wuxuu kujiraa daboolka hoostiisa. Isku soo wada duuboo, waxay ku timaadaa 4GB oo RAM ah iyo 64GB oo ah kaydinta la dheereysan karo ee la dhisay.
Imaatinka waaxda sawirada, shaxda waxaa lagu qalabeeyay kamarad 8-megapixel (f / 2.0) ah oo saaran qeybta dambe ee autofocus. Xirfadaha isdabamarinta iyo wicitaanada fiidiyowga, waxaa jira toogto kale oo 8-megapixel (f / 2.0) ah xagga hore, laakiin autofocus ma leh. Dhinaca hore ee software-ka, MediaPad M5 Youth boot ayaa EMUI 8.0 interface ku saleysan Android Oreo 8.0. Qalabku wuxuu ku tiirsan yahay batari aad u weyn oo ah 7,500 mAh oo leh taageero si dhakhso ah loogu dalaco baahidaada koronto.
Dhinaca isku xirnaanta, MediaPad M5 Edition Edition wuxuu ku faanaa dekedda USB-C-C, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, iyo maqal maqal ah oo gaaraya 3,5mm. Amniga awgiis, waxaa jira skaanka faraha ee lagu dhisay badhanka guriga ee dhinaca hore.
Huawei wuxuu sii daayay MediaPad M5 Daabacaadda Dhallinyarada oo laba nooc ah: Wi-Fi oo keliya iyo LTE. Midkii hore waxaa lagu qiimeeyay 1.899 yuan (~ 240 euro), halka noocyada kuxiran shabakada ay la socdaan qiimo dhan 2.099 yuan (~ 265 euro). Kaniiniga waxaa loo sudhay dalab hordhac ah oo ku saabsan dukaanka tooska ah ee shirkadda Huawei ee Shiinaha waxaana lagu heli karaa midabka Dahabka Champagne.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Huawei MediaPad M5 Youth: kiniiniga cusub ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Google ayaa cusbooneysiin doonta Pixel 3 si loo saxo dhibaatooyinka xusuusta
Telefoonada Huawei ee cusbooneysiiya EMUI 9.0 toddobaadkan